Koety: Bilaogera-Mpaka Sary Norahonana sy Nodarohan’ny Polisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2013 14:03 GMT
Vakio amin'ny teny polski, বাংলা, Español, English
Ny gazety antserasera Alaan no nitatitra voalohany ny momba azy tamin'ny lohateny hoe “Nametra-pialàna ny Minisitry ny fampahalalam-baovao Bedoona.” Nivoaka ity lahatsoratra ity taorian'ny telo volana nisamborana an'ilay mpikatroka Abdulhakim al-Fadhli izay ao anatin'ny fitokonana tsy hihinan-kanina ankehitriny, sazy an-tranomaizina roa taona no azony noho ny fampiasany Twitter hikarakarana sy hanentanana fihetsiketsehana. 7mgan nanoratra ireto sioka ireto tamin'ny 11 Febroary, nanao veloma ny fikatrohana antserasera (cyber-activism):
@7MGAN: Tsy handany fotoana amin'ny fitantarana izay zava-nihatra tamiko aho noho ny famoretana sy ny famonoana nataonà sampana iray an'ny governemanta. Nampanaovan'izy ireo sonia mampanantena fa tsy hanatontosa lahatsary intsony aho.
@7MGAN: Vavolombelon'ity Andriamanitra: Nanova ny teny miafinako tsy ankijery tao amin'ny YouTube aho herinandro vitsy lasa izay, porofo amin'ny fisian'ny tsy rariny sy ny fampijaliana mahazo antsika izany.
@7MGAN: Mino aho fa hamela [ny fahadisoako] ireo tsy manan-tanindrazana ao Koety. Tsy sitrapoko izao. Tafiditra anaty toe-draharaha manahirana aho saingy tsy hanadino anareo mandrakizay ity “Bedoona tezitra, naman'ireo nampahoriana ity.